Global Voices teny Malagasy » Oganda: Nahoana no tsy nanoratra mikasika ilay tantara lehibe indrindra an’ny firenena ireo Ogandey blaogera ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Aogositra 2018 4:37 GMT 1	 · Mpanoratra Joshua Goldstein Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Oganda, Somalia, Ady & Fifandirana, Fahasalamàna, Fanoherana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Nangina momba ny tantara lehibe indrindra an'ny firenena ny tontolon'ny blaogy Ogandey nandritra ireo herinandro maromaro lasa. Tamin'ny 5 Martsa, nanao fitokonana ireo ogandey mpitsara sy mpahay lalàna taorian'ny bemidina nataon'ireo mpiaro ny filoha tao amin'ny Fitsarana Avo mba hisamborana indray ireo olona enina noahiahiana ho mpamadika izay navotsotra rehefa nandoa onitra. Nampangaina ho nisolo tena ny People's Redemption Army (PRA)  ireo olona noahiahiana ireo, vondrona mpikomy izay nisy an'i Dr. Kizza Besigye , kandidà avy tamin'ny antoko mpanohitra.
Tamin'ny 14 Martsa, navotsotra ny maro tamin'ireo noahiahiana taorian'ny voalaza fa nidarohana azy ireo , sy niaraka tamin'ny fisian'ny fitokonan'ny rafi-pitsaràna, dia nanao matso manodidina ny Fitsarana Avo mba hanadiovana azy amin'ilay zava-nitranga. Nandefa taratasy ho an'ny fitsarana ary nanolotra ny fialantsininy tamin'ity zava-nitranga ity ny Filoha Museveni. Fa naninona no tsy naneho hevitra mikasika ity tantara lehibe ity ny tontolon'ny blaogy? Mety noho ny tahotra valifaty avy amin'ny fanjakana na koa ny fandehanan'ny fitondran'i Luseveni toy ny isanandro no antony.
Any amin'ny vaovao hafa, mizara ny lesona azony avy tamin'ny fahitana adin'akoholahy vao maraina  ny The Diocese of northern Uganda  (Diosezin'ny faritra avaratr'i Ogandà):
Tany am-piandohan'ity herinandro ity, niditra tao anatin'ny resaka fandriampahalemana niarahana tamin'ny Fanjakana ao atsimon'i Sodana ny Lord's Resistance Army (LRA), taorian'ny herinandro maro nanoherana ilay resaka. Toy ny vintana faharoa no fahitan'ny Uganda-CAN  izany:
Tamin'ity volana ity ihany koa, tonga tao Mogadishu ireo tarika Ogandey mba hampitomboan'ireo silamo ny afon'ireo mpikomy. Ao anatina adihevitra mandeha ao amin'ny tontolon'ny blaogy, tohanan'i Jackfruity ny hoe fanapahankevitra ratsy ilay fandefasana tafika ogandey mpampandry tany ho any Somalia  :
Ao anatina vaovao maivamaivana kokoa, ho an'ireo nanontany tena momba izay zavatra afaka atao raha toa ka manana 36 ora ao Kampala, manana tolokevitra vitsivitsy  ny In An African Minute . Ity misy iray:
Zoma – 2 tolakandro: Mividy mpanjono ao amin'ny tsena fivarotana trondro ao Munyonyo- Farihy Viktoria, dia toetra mampiavaka ilay faritra ary toerana iray tena tsara be. Misy fomba hafa tsara kokoa hahitana ilay farihy noho ny eo ambonina kitay tsy dia azo atokisana ary efa loadoaka izay mamofona toy ny rotsakazon'ny Nila? Afaka mividy mpanjono  ho an'ny sambony ianao amin'ny alalan'ny $4 isanandro. 500 metatra lavitra ilay morondrano, misy nosy tsy misy mipetraka.
Farany, mieritreritra amin'ny fanaovana ilay tapadamba mena manohitra ny SIDA maneraina an'i Kampala  i Just Sayin  :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/16/124592/
 nanao fitokonana : http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6441239.stm
 People's Redemption Army (PRA): http://en.wikipedia.org/wiki/People
 taorian'ny voalaza fa nidarohana azy ireo: http://allafrica.com/stories/200703141186.html
 fahitana adin'akoholahy vao maraina: http://dioceseofnorthernuganda.blogspot.com/2007/03/winnner-in-this-war.html
 The Diocese of northern Uganda: http://dioceseofnorthernuganda.blogspot.com/
 Toy ny vintana faharoa : http://www.ugandacan.org/item/2095
 fandefasana tafika ogandey mpampandry tany ho any Somalia: http://jackfruity.blogspot.com/2007/03/why-i-oppose-sending-ugandan-troops-to.html
 tolokevitra vitsivitsy: http://inanafricanminute.blogspot.com/2007/03/36-hours-in-kampala_13.html
 In An African Minute: http://inanafricanminute.blogspot.com/
 mividy mpanjono: http://inanafricanminute.blogspot.com/2006/09/rowing-lake-vic.html
 fanaovana ilay tapadamba mena manohitra ny SIDA maneraina an'i Kampala: http://chantal-sayin.blogspot.com/2007/03/frogs-snails-and-puppy-dogs-tails.html
 Just Sayin: http://chantal-sayin.blogspot.com/